Izikolo ezisi-8 zeCulinary eLouisiana| Imirhumo kunye neeNkcukacha 2022
Izikolo ezisi-8 zeCulinary eLouisiana| Imirhumo kunye neenkcukacha
Ngamana 19, 2022 Ewe James
Izikolo zeCulinary eLouisiana ziye zaba ngumqolo kubantu abaninzi abaqale umsebenzi wokupheka okanye kwishishini lenkonzo yokutya njengoko befundisa yonke into efunekayo ukuqalisa uhambo kwishishini lenkonzo yokutya. Ke, ukuba unomdla kwizikolo zaseCulinary eLouisiana, ndiyakubongoza ukuba uhlale unamathele kwesi sithuba.
Ukuba ndithega esi sithuba “Masifundwe” kwabo banomdla kwizikolo zokufundisa eLouisiana, andihleki. Inye into endihlala ndicebisa ngayo abo bangena kwindawo yokutyela okanye kwizikolo zokupheka kukuba kufuneka bafunde ngayo yonke into malunga nokutya abanokuthi bafumane, bafunde kubapheki abaqeqeshiweyo abebekwishishini, kwaye basebenzise izifundo ezikwi-Intanethi ezinje. iikhosi zokupheka zasimahla kwi-intanethi ezinezatifikethi ukufumana ulwazi oluninzi.
Njengomntu onomdla kwishishini lokutya, ukhe wacinga ukuba uzibandakanya njani iiklasi zokubhaka zasimahla kwi-intanethi kuya kunceda ukwandisa ulwazi lwakho kwishishini lokupheka? Kuthekani xa ufunda ukugcina ucoceko lokutya olufanelekileyo, kwaye uqinisekise impilo entle ngokuthatha izifundo zokhuseleko lokutya kwi-intanethi? Nceda wenze njalo ukuba awuzange wenze njalo.
Ngoxa kukho 22 izikolo zokupheka eGeorgia, 65 kwizikolo zokufundisa eCalifornia, ILouisiana inezikolo ezininzi ezigqwesileyo zokupheka ezineenkqubo ezinokugqitywa kwisithuba esingangonyaka okanye emibini ngokuxhomekeke kulowo usibhalisele.
Ngabantu abamalunga nezigidi ezi-4.665 ngokutsho I-United States Census Bureau, equka abahlali, iindwendwe, kunye nabakhenkethi abangena kwiindawo zokutyela ezikumgangatho ophezulu njenge-RAW yokutyela, i-Verona Italian Ristorante, i-Tommy's On Thomas, kunye nezinye ezininzi, kubalulekile ukuqaphela ukuba i-Louisiana iyalixabisa ishishini lokutya kakuhle, kwaye nawe uphumelele apho, kufuneka ube wodwa kwaye wenze izinto ezintsha ngokupheka kwakho.
I-avareji yeendleko zokufunda kwesinye sezikolo zokupheka eLouisiana yi-$4,515 ngelixa i-$2,155 sisixa-mali somndilili wokufunda onokuwunikwa. Jonga eli nqaku kwi kwizikolo zokufundisa eFlorida ukuba unomdla.
Ngoku, kukho iimfuno ezifunekayo kwisikolo sokufundisa. Nangona iimfuno zahlukile kwisikolo ngasinye, njengeemfuno ze izikolo zokupheka eMiami zahlukile kwi eMissouri, kusekho iimfuno jikelele okanye ezisisiseko uninzi lwezikolo zokupheka ukuba ayizizo zonke eziya kucela. Ngezantsi kukho ezinye zazo:
Kuya kufuneka ugqibe isikolo sakho samabanga aphakamileyo kwaye ulungele ukubonisa izatifikethi zezikolo eziphakamileyo, imibhalo esemthethweni, iGED, HISET, amaxwebhu alinganayo esikolweni, njl.
Kufuneka uhlawule umrhumo ongabuyiswayo we-$25. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuqaphela ukuba kwezinye izikolo, inokuba ngaphezulu okanye ngaphantsi kwaye isenokungafuneki nakwezinye izikolo.
Kufuneka unikeze iileta zakho zereferensi kunye namakhadi esazisi asebenzayo.
Kufuneke u bhala kwaye ungenise isincoko sakho
Kuya kufuneka ube nekhadi lemvume yokufunda okanye i-visa yabafundi yabafundi bamanye amazwe.
Amanqaku akho kwiimvavanyo zobuchule ezifana ne-IELTS okanye i-TOEFL yesiNgesi, i-DELE yolwimi lwesiSpanishi, i-DELF okanye i-DALF yesiFrentshi, kunye ne-DSH, i-OSD, i-TELF, kunye ne-TestDAF yolwimi lwesiJamani kufuneka ingeniswe. Qaphela kwakhona ukuba ayizizo zonke izikolo zokupheka ezikufunayo oku.
Emva kokuba sizibonile iimfuneko eziqhelekileyo zokubhalisa kwisikolo sokufundisa, ngoku makhe sifudukele kwizikolo zokufundisa eLouisiana size sibone ukuba ibandakanya ntoni na.
Izikolo zeCulinary eLouisiana
3. IKholeji yoLuntu yaseBossier Parish
4. IYunivesithi yaseNicolls State
6. IKholeji yoLuntu yaseMzantsi Louisiana
7. IKholeji yaseNorthshore Technical Community College
8. IKholeji yoLuntu yaseDelgado
Apha ngezantsi zizikolo zokupheka eLouisiana. Ihlanganiswe ngononophelo, kunye neenkcukacha zabo ezifana nobude beprogram, iindleko, iimfuno zokwamkelwa, njl. Ndiyakubongoza ukuba ulandele ngononophelo.
ILouisiana Culinary Institute sesinye sezikolo zokupheka eLouisiana esijolise ekunikeni abafundi imfundo eyaneleyo yokupheka nokubalungiselela imisebenzi yokupheka kunye nokuqhubela phambili kwinkalo yokupheka.
Iziko elise-Baton Rouge lineenkqubo ezintathu zokupheka ezizezokubhaka kunye ne-pastry, ubugcisa bokupheka, ububele, kunye nolawulo lokupheka, kwaye emva kokugqitywa, abafundi bawongwa nokuba yi-AOS okanye i-BS degree kubugcisa bokupheka.
Isikolo sikwanazo iivenkile zokutyela kunye neekhitshi zeprojekthi apho kuqhutywa khona okusebenzayo ukuxhasa ithiyori kunye nokulungiselela abafundi abangakumbi ngokuqeqeshekileyo. Ubude benkqubo bumalunga neminyaka emi-2, kwaye ixabiso eliqhelekileyo lemali yokufunda malunga ne-14000 yeedola - $15000.
Iimfuno zale nkqubo zezi zilandelayo:
Kuya kufuneka ubonise ubungqina bokuphumelela kwisikolo samabanga aphakamileyo okanye esilinganayo. Amaxwebhu amkelekileyo obungqina ngala: idiploma yesikolo samabanga aphakamileyo, imibhalo yesikolo samabanga aphakamileyo (esemthethweni), iGED, iHISET, amaxwebhu alinganayo kwisikolo samabanga aphakamileyo, okanye isatifikethi esamkelweyo sesikolo sasekhaya.
Kuya kufuneka uhlawule umrhumo ongabuyiswayo we-25.00 yeedola ngelixa usenza isicelo sakho.
Kuya kufuneka unikeze iileta ezintathu zokubhekisa malunga nabalinganiswa bakho abaqeqeshiweyo.
Kuya kufuneka ubhale kwaye ungenise isincoko sakho esichaza injongo yakho yokuba nesidanga kubugcisa bokupheka. Isincoko sakho kufuneka sibe ngamagama angama-500-750.
Kuya kufuneka uhlale kwaye ugqibezele uvavanyo lwezibalo oluphuhliswe liziko lokupheka laseLouisiana.
Kufuneka ube ululungele udliwano-ndlebe nephaneli yolwamkelo.
Kuya kufuneka uthathe kwaye uphumelele uvavanyo olusisiseko lwe-Wonderlic ukuba awunaso isidanga esinxulumeneyo okanye imibhalo esemthethweni yekholeji echaza ibakala ubuncinci "C" kwiKhosi yeMathematika okanye yesiNgesi.
Kufuneka unikeze ubungqina bokuba ngummi usebenzisa iindlela ezimbini zokuzazisa. Omnye kufuneka abe ne-ID yefoto efana nesatifikethi sokuzalwa, ilayisenisi yokuqhuba, ikhadi lokhuseleko loluntu, ipasipoti, njl.
Emva kokungeniswa kwinkqubo, kufuneka ukubhaliswa kwe-$ 75.00.
Ukufaka isicelo, sebenzisa ikhonkco elinikwe ngezantsi
IKholeji yobuChwepheshe yaseSowela sesinye sezikolo ezidumileyo zokupheka eLouisiana ezixhobisa abafundi ngayo yonke into efunekayo ukuze baqalise umsebenzi wokupheka othi bakuba bewugqibile, bafumane isidanga se-AAS okanye idiploma kubugcisa bokupheka.
Iziko elisechibini uCharles livunyiweyo yi-American culinary federation kwaye ibandakanya iindawo ezifana nokutya kwengingqi, imigaqo yemveliso kwindawo yokutyela, isondlo, iinkonzo zegumbi lokutyela, njl.njl kwizifundo zabo.
Inkqubo inokugqitywa malunga neminyaka emibini yokufunda ngokusisigxina, kwaye i-avareji yeendleko zokufunda yi-$ 2371. Iimfuno zale nkqubo zezi zilandelayo:
Kuya kufuneka ukhethe inkqubo yakho yokufunda kwaye ufake isicelo sokwamkelwa kwi-Intanethi.
Kufuneka ubonise ubungqina bogonyo.
Kufuneka ubonise ubungqina bokubhaliswa ngenkonzo ekhethiweyo.
Kuya kufuneka ujonge uluhlu olutsha lokukhangela abafundi kwaye ungenise zonke izinto ezifunekayo.
Kufuneka uthathe uvavanyo lokubeka i-SOWELA okanye ungenise amanqaku akho asemthethweni oMTHETHO okanye weSAT.
Unokufaka isicelo soncedo lwemali okanye i-scholarship.
Kuya kufuneka uye kuqhelaniso kwaye udibane nomcebisi wezemfundo.
Kufuneka uhlawulele iiklasi kwaye uthenge iincwadi zakho.
Ikholeji yasekuhlaleni yaseBossier iphakathi kwezikolo zokupheka eLouisiana ezixhobisa abafundi ngolwazi kunye nezakhono ezisetyenzisiweyo ukuziqhelanisa nabapheki abaziingcali, hayi nje kwizikhundla ezikumgangatho wokuqala, kodwa kwizikhundla eziphezulu ngokusebenzayo.
Iziko elikwisiXeko saseBossier libonelela ngeDigri yeSayensi eSetyenzisiweyo kubugcisa bokutya ekugqityweni kwenkqubo. Isilabhasi inqumla ukuqondwa kweziseko zemathematika njengoko zinxulumene nomsebenzi wobugcisa bokupheka, ukusetyenziswa kwemigaqo yokulungiswa kokutya efana neziseko zokulungiselela ukutya, ucoceko, ucwangciso lwemenyu, inkonzo yegumbi lokutyela, njl.
Inkqubo inokugqityezelwa phantsi kweesemesta ezine okanye iminyaka emibini, kwaye ixabiso eliphakathi lemali yokufunda yi-2,371 yeedola. Isishwankathelo seemfuno zeprogram sinokubonwa Apha
IYunivesithi yaseNicholls State ngokusebenzisa iChef John Folse Culinary Institute ikwasesinye sezikolo zokupheka eLouisiana ezibonelela ngoqeqesho olunzulu kubugcisa bokutya kunye nemimandla kuyo yonke imisebenzi yokupheka, ipatisserie, inkonzo kunye nolawulo lweshishini, uphando kunye nophuhliso, njl.
Iziko eliseThibodaux linomlinganiselo we-16:1 womfundi notitshala kwiindawo zasekhitshini ukuze kuqinisekiswe ukuba abafundi bafumana izifundo ezifanelekileyo zomntu ngamnye notitshala walebhu. Kukwakho ithuba lokuba abafundi basebenze kwindawo yokutyela eqhutywa ngabafundi eyaziwa ngokuba yiLeBistro eCarmel Inn.
Oku kukulungiselela abafundi ukuba bajongane neendima kwishishini lokupheka okanye lenkonzo yokutya. Ubude benkqubo bumalunga neminyaka emi-4 kwaye iindleko zomrhumo wokufunda yi-3,924 yeedola. Iimfuno zale nkqubo zezi zilandelayo:
Kuya kufuneka ube nediploma yesikolo samabanga aphakamileyo okanye iGED
Kuya kufuneka ungenise amaxwebhu akho asemthethweni esikolo samabanga aphakamileyo okanye ukulingana.
Kuya kufuneka ungenise amanqaku ovavanyo lwe-ACT okanye iimviwo zeSAT
Ukuba ungaphezulu kweminyaka engama-25 ngexesha lokufaka isicelo, kufuneka ufake isicelo semfundo yabadala.
Ikholeji yasekuhlaleni yaseNunez sesinye sezona zikolo ziphezulu kwezokupheka eLouisiana ezinika uqeqesho olunzulu kubafundi abafuna ukuba neshishini labo loshishino lokutya, kwaye baphinde babe nobuchule kwiikhonsepthi zenkonzo yokutya kunye neendlela zococeko.
Iziko elibekwe e-Chalmette libonelela ngenkqubo yoshishino yokupheka ebandakanya iindawo ezinje ngokubhaka, ulawulo lweendleko, ucoceko, ukubeka iliso, njl., kwaye ekugqityweni kwawo amabhaso abafundi abaDibanisa kwiSidanga seSayensi eSetyenzisiweyo kubugcisa bokutya.
Ubude benkqubo bumalunga neminyaka emibini kwaye umndilili weendleko zokufunda yi-2,371 yeedola. Iimfuno zale nkqubo zezi zilandelayo:
Kufuneka ugcwalise kwaye ungenise isicelo sokwamkelwa
Kuya kufuneka ubonise imibhalo yakho yesikolo esiphakamileyo okanye amaxwebhu asemthethweni.
Kuya kufuneka ungenise amanqaku akho e-ACT okanye e-SAT.
Kufuneka unikeze ubungqina bogonyo.
Kufuneka unikeze ubungqina bokuba uhlala phi kwaye uzimase uqhelaniso.
IKholeji yoLuntu yaseSouth Louisiana ikwaphakathi kwezikolo zokupheka eLouisiana ezilungiselela abafundi abakwimizimveliso yokutya okanye yenkonzo yokutya.
Iziko elibekwe eLafayette linika abafundi amathuba okuba bafunde malunga neresiphi kunye nokucwangciswa kwemenyu, ukulungiselela nokupheka ukutya, ukongamela kunye nokuqeqesha abancedisi basekhitshini, ulawulo lokutya kunye nezixhobo zasekhitshini, kunye nobuchule kuluhlu olubanzi lokutya kunye neendlela zokupheka.
Bakuba begqibile, abafundi banokufumana isidanga somdibaniso okanye idiploma yobugcisa kwinkqubo. Ubude benkqubo bumalunga neminyaka emibini kwaye ushwankathelo lweendleko ze-avareji zeefizi zokufunda zinokubonwa. Apha
Kuya kufuneka ugqibe isikolo samabanga aphakamileyo okanye uzuze ukulingana okufana neGED okanye HISET
Kufuneka unikezele ngeerekhodi zogonyo
Kuya kufuneka unikeze ikopi yesikolo sakho esiphakamileyo esiguqulelwe kwisiNgesi.
Kuya kufuneka ungenise ingxelo esemthethweni ye-TOEFL okanye ye-IELTS yamanqaku.
Kuya kufuneka unikeze incwadana yakho yokundwendwela kunye nekopi ye-visa yakho
Kufuneka unikezele ngeefom ezi-1 ukuya kwezingama-20 zokutshintshela kwezinye iindawo ezivela kwiikholeji zangaphambili ebezikho ukuba ziyafuneka.
Ukufaka isicelo, sebenzisa ikhonkco elingezantsi
IKholeji yaseNorthshore yobuGcisa yoLuntu sesinye sezikolo zokupheka eLouisiana esijolise ekufundiseni abafundi ukuba babe ziingcali zokupheka eziqeqeshwe kakhulu besebenzisa amava ethiyori kunye nawokwenza.
Iziko eliseGreensburg liphonononga icandelo lenkonzo yokutya, ubugcisa bokupheka, kunye neshishini lokwamkela iindwendwe elithe lakuba ligqityiwe lincede abafundi ukuba bahlule iyantlukwano yamazwe ngamazwe, imbali, kunye nendaleko yobugcisa bokupheka kunye nemigaqo yokuchongwa kokutya.
Ubude beprogram imalunga neminyaka emibini kwaye kufuneka igqitywe ubuncinane ngenqaku lebakala "C" okanye umndilili we-2.0 okanye ngaphezulu kuwo wonke umsebenzi wekhosi osebenzayo. Umndilili weendleko zokufunda yi-2,371 yeedola.
Iimfuno zeprogram azizange zichazwe, nangona kunjalo, ukutyelela rhoqo kwiwebhusayithi kwimeko yohlaziyo kuyacetyiswa.
Ikholeji yoluntu yaseDelgado ikwaphakathi kwezikolo ezidumileyo zokupheka eLouisiana ezixhobisa abafundi ngezakhono ezinzulu kunye nolwazi lobugcisa bokutya ngokusebenzisa ithiyori kunye namava asebenzayo ngokulandelelanayo.
Iziko eliseNew Orleans lilungiselela abafundi ukuqeshwa kwimisebenzi ekwinqanaba lokungena kwaye baqhubele phambili kushishino lwenkonzo yokutya. Le nkqubo igxile ekufundiseni umpheki, ukutya, ukulungisa ukutya, kunye nobugcisa bepastry.
Ubude benkqubo bumalunga neminyaka emibini kwaye umndilili weendleko zokufunda malunga ne-2371 yeedola. Iimfuno zale nkqubo zezi zilandelayo:
Kufuneka ube neminyaka eli-18 ubudala; uxwebhu luyafuneka.
Kuya kufuneka ugcwalise ngempumelelo kwaye ungenise isicelo sobugcisa bokupheka
Kufuneka unikeze iileta ezimbini zereferensi
Kuya kufuneka unikezele ngemibhalo yesikolo samabanga aphakamileyo okanye amaxwebhu asemthethweni alinganayo
Kuya kufuneka ukuba wamkelwe eDelgado
Kufuneka ungenise amanqaku akho ovavanyo lwe-ACT.
Kufuneka ube nezona zinkulu ezichanekileyo ezidweliswe kwisixokelelwano sebhena.
Kufuneka ulungele udliwano-ndlebe lwefakhalthi
Kuya kufuneka ulungele ukubhalisela i-ENGL 101 okanye i-ENLG 110 kunye ne-MATH 098 njengoko kumiselwe yimibhalo yakho yekholeji okanye iimviwo zokubeka iDelgado.
Kufuneka uye kudliwano-ndlebe lomlawuli weprogram.
Okwangoku, ndingatsho ukuba nabani na onomdla kwisikolo sokufundisa eLouisiana uxhotyiswe ngazo zonke izixhobo eziyimfuneko ukuze enze isicelo saso nasiphi na isikolo sokufundisa eLouisiana ngasentla. Ndiyakholelwa ukuba ukuba ulandela izikhokelo kunye namanyathelo acetyiswayo apha ngasentla, ukwamkelwa kwakho kuqinisekile.
Unokujonga kwakhona kwinqaku lethu izikolo zokupheka e-Alabama ukuba unomdla.
Ndikunqwenelela ithamsanqa njengoko ufaka isicelo!
Izikolo Culinary e Houston | Imirhumo kunye neenkcukacha
Izikolo Culinary e Vermont | Imirhumo kunye neenkcukacha
Izikolo Culinary e Rhode Island | Iintlawulo & neenkcukacha
Izikolo eziPhezulu zeCulinary eOregon | Iintlawulo, kunye neeNkcukacha
Izikolo eziBalaseleyo zeCulinary eTexas | Imirhumo kunye neenkcukacha
Izikolo eziBalaseleyo zeCulinary eArizona | Imirhumo kunye neenkcukacha
Izikolo zeCulinary eMaryland | Iintlawulo, kunye neeNkcukacha
UMbhali woMxholo kunye noMyili at Study Abroad Nations | Bona amanye amanqaku am
UJames ngumbhali, umphandi, kunye nomyili eSAN. Ngaphandle kophando, uye wanceda abafundi abaninzi ukuba bakhuseleke ngokumkelwa kunye nokufundiswa kwamanye amazwe.
Unomnqweno ovuthayo wokunceda abaphengululi bafikelele incopho yamaphupha abo emfundo kwaye akaze ayeke ukubonelela ngolwazi olusebenzayo ukunceda abafundi nangaliphi na ixesha.
Ngaphandle kokubhala, uYakobi wenza izisombululo zoyilo lwegraphic-notch ephezulu.
I-10 ephezulu ngexabiso eliphantsi kwi-MBA ye-Intanethi eIndiya
I-MBA eyi-10 ebiza kakhulu e-UK yaBafundi beZizwe ngezizwe
I-MBA eyi-10 ebiza kakhulu eOstreliya yaBafundi baMazwe ngaMazwe
I-10 ephezulu ye-MBA Scholarship eOstreliya
Post Previous:Izikolo ezi-7 eziBalaseleyo zeCulinary eHouston | Imirhumo kunye neenkcukacha
Okulandelayo Post:Izinto ezintsha zobuchwephesha zeNkulungwane yama-21 ezichaphazela uLonwabo kunye neHlabathi leMidlalo